शरीर कमजोर महशुस भयो ? खानुहोस् यी ५ खानेकुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
अनारः एन्टिअक्सीडेन्ट, एन्टिवायरल र एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरु भरपुर मात्रामा पाइन्छ। अनारले शरीरको रगतको मात्रालाई पनि बढाउँदछ। शरीरमा थकान महसुस हुनु, कमजोरी महसुसको मुख्य कारण भनेको शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रगत नहुनु हो। दैनिकरुपमा एउटा अनार सेवन गर्दा शरीरले उचित मात्रामा पोषण पाउने गर्दछ। साथै यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि सदृढ गर्दछ। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)
अण्डा खाएपछि भूलेर पनि नखानुहोस् यी चिजहरु !!
एमाले एकता अन्तिम चरणमा पुग्यो : गोकर्ण विष्ट